साबधान ! को-रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस - Nepali in Australia
May 31, 2021 autherLeaveaComment on साबधान ! को-रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
एजेन्सी- को- रोना संक्रमण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जुन खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर हुनबाट बचाउँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । को- रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले निम्न खानेकुराहरुबाट टाढै बस्नु होला ।
१) मसालेदार खाना:- को- रोना लागेको व्यक्तिले धेरै मसालेदार खानाको सेवन गर्नु हुँदैन । थारै मसाला ठिक हुन्छ तर धेरै सेवन गर्नाले यसले नकरात्मकम रुप लिन सक्छ । को- रोना लागेको व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतमको कमी भएको हुन्छ । त्यसैले मसालेदार खानाको सट्टा सादा र पोषिलो खानामा ध्यान दिन आवश्यक छ । खानामा खिचडीको प्रयोग पनि राम्रो मानिदै आएको छ । खानामा खिचडीको प्रयोग गर्दा खाना छिट्टै पच्छ र स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।
२) तारेको खानेकुराहरु:- बनाउन सजिलो भएता पनि तारेको खानाले हाम्रो शरीरललाई भने फाइदा गर्दैन । तारेको खानामा अस्वस्थ बोसोको मात्रा बढी रहेको हुन्छ जसले गर्दा पच्न गाह्रो हुन्छ । तारेको तथा फ्राई गरिएको खानेकुराले शरीरको तौल बढ्ने गर्दा यसले अन्य रोगहरु पनि निम्त्याउने गर्छ ।
३) प्याक गरिएको खाना:- को- रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले प्याक गरिएको खानाबाट टाढै बस्न आवश्यक हुन्छ । यो खानेकुरा बासी हुने भएकाले यस किसिमका खानेकुरामा शरीरलाई चाहिने पोषक तत्वकोे कमी हुन्छ । प्याक गरिको खानाभन्दा बढी फाइदा ताजा पकाइएका खानेकुरामा ताजा आफूलाई मन पर्ने किसिमले पकाएर खाने बानी बसालौ । यदि आफन्तलाई को- रोना संक्रमण भई आईसोलेसनमा बसेको छ भने पनि ताजा र पोषिलो खानेकुराहरु खान दियौँ ।
४) चिसो पेय पदार्थ:- को-रोना संक्रमित व्यक्तिले चिसो पेय पदार्थ तथा सोडा भएको पेय पदार्थको सेवन गर्नु राम्रो हुँदैन । को- रोना संक्रमित व्यक्तिले भने तातो पानी, बेसार पानी, काँढा, कागती पानी जस्ता पदार्थको सेवन गर्नु नै राम्रो हुन्छ । कागती पानीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्धत गर्दछ । दूध बेसार पाि राम्रो मानिदै आएको छ ।
यो पनि पढ्नुस: अक्सिजनको स्तर बढाउन र फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्न खानुहोस यी खानेकुरा
शरीर स्वस्थ रहन फोक्सोले राम्रोसँग कार्य गर्न आवश्यक छ। फोक्सोले फिल्टर गरेपछि मात्र अक्सिजन शरीरको प्रत्येक भागमा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा फोक्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि फोक्सोले राम्ररी काम कार्य गरेन भने दम, ब्रोन्काइटिस, निमोनिया, क्षयरोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, को-रोनाभाइरस महामारीबाट बच्नको लागि फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले सल्लाह दिन्छन्। किनभने, कोरोनाभाइरस सिधै फोक्सोमा प्रहार गर्दछ, फलस्वरूप अक्सिजनको स्तर कम हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ।
को-रोनाभाइरसको दोस्रो लहर चलेपछि अधिकांश बिरामीहरुलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। शरीरमा अक्सिजनको स्तर द्रूूत रूपमा कम भइरहेको छ। संक्रमण भएको केहि दिनमै अक्सिजनको स्तर ८० भन्दा कम भएको उदाहरणहरु सार्वजिक भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अक्सिजन तुरून्त आवश्यक हुन्छ। यदि यस अवधिमा समयमै अक्सिजन उपलब्ध भएन भने अवस्था गम्भीर हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा पहिले देखिनै फोक्सोको ख्याल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि एसईई परीक्षा आन्तरिक मुल्याकंन विधिबाट
कोरोनाको खतरा बढ्यो, आज १ सय ३९ संक्रमितको मृ’त्यु
भियतनाममा भेटियो हावाबाटै फैलने र बढी ख’तरनाक को’रोनाको नयाँ हा’इ’ब्रि’ड भेरियन्ट
May 30, 2021 May 30, 2021 auther
खुसीको खबर : रुसले ल्यायो एकै डोजले काम गर्ने खोप !!
May 8, 2021 May 8, 2021 auther